Arsenal Oo Laga Soo Diiday Dalabkii Ay Ka Gudbiyeen Khadka-dhexe Ee Anderlecht – Garsoore Sports
Arsenal Oo Laga…
Arsenal Oo Laga Soo Diiday Dalabkii Ay Ka Gudbiyeen Khadka-dhexe Ee Anderlecht
Kooxda Anderlecht ee dalka Belgium ayaa dib u celisay dalabkii ugu horreeyay ee ay Arsenal ka gudbiso 21 jirka khadka dhexe ee Albert Sambi Lokonga.
Gunners ayaa ugaarsi ugu jirta ugu yaraan hal ciyaaryahan oo khad-dhexe ah xagaagan maadaama tababare Mikel Arteta uu qorsheynayo isku shaandheyn ku sameeyo kooxdiisa, Sambi Lokonga ayaana kamid ah dhowr magac oo uu doonayo.
Sida laga soo xigtay Het Laatste Nieuws, rabitaanka xiddiga iyo Arsenal ayaa ah mid isku mid ah iyadoo Sambi Lokonga uu sidoo kale doonayo inuu ku biiro Arsenal. Anderlecht ayaase la fahamsan yahay inay diyaar u tahay inay iibiso, laakiin kaliya qiimaha saxda ah ayay ku iibinayaan, mana aysan la dhicin dalabkii ugu horreeyay ee Arsenal oo ahaa ku dhowaad 13 milyan oo ginni.
Dalabka waxaa ka mid ahaa gunnooyin iyo qodobo kale oo dheeri ah hayeeshee Anderlecht ayaa waqti yar ku lumisay inay dib u celiso. Maadaama ay doonayaan ugu yaraan 17 milyan oo ginni.
Kooxda reer Belguim ayaa sidoo kale ka warqabta xiisaha meelo kale ka imanaya ee loo qabo Sambi Lokonga. Dhinacyo aan la shaacin oo ka socda labadaba horyaaladda Jarmalka iyo Faransiiska ayaa wadahadalo la yeeshay 21 jirkan, waxaana jira rajo ah in dalabkii ugu horreeyay ee Arsenal uu ka dhasho dagaal dalab ah oo kooxo badan dhex mara.
Dean Henderson Oo Laga Saaray Xulka Ingiriiska Ee Tartanka Qaramada Yurub